Madaxweynaha Maraykanka oo Laalay heshiiska Nabadda ee Taalibaan iyo Shuruudaha Rabitaan ee labada Dhinac | Somaliland Post
Home News Madaxweynaha Maraykanka oo Laalay heshiiska Nabadda ee Taalibaan iyo Shuruudaha Rabitaan ee...
Madaxweynaha Maraykanka oo Laalay heshiiska Nabadda ee Taalibaan iyo Shuruudaha Rabitaan ee labada Dhinac
Washington (SLpost)- Madaxweynaha Dalka Maraykanka, Donald Trump ayaa sheegay inuu joojiyay heshiis nabadeed oo uu dalkaasi la galay ururka Taalibaan ee ka dagaalada gudaha dalka Afghanistan iyo qaybo ka mid ah Pakistan.
Mr Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay farriin uu ku sheegayo inay aheyd inuu Axadda kula kulmo Madaxweynaha Afgaanistaan, Ashraf Ghani, iyo hogaamiyayaal sarsare oo Taalibaan ka tirsan.
Hasayeeshee waxa uu baajiyay shirkaasi ka dhici lahaa Camp David kaddib markii Taalibaan ay sheegatay inay ka dambaysay weerar dhawaan ka dhacay magaalada Kaabul kaas oo uu ku dhintay askari Ameerikaan ah.
Ninka Mareykanka u qaabilsan wadaxaajoodka Zalmay Khalilzad ayaa waxa uu Isniintii ku dhawaaqay in ‘mabda ahaan’ heshiis nabadeed lala gaadhay Taalibaan.
Waxaanay taasi timid kaddib wada-hadallo sagaal wareeg galay oo u dhaxeeyay Mareykanka iyo xubno matalayay Taalibaan, kulamadaas oo ka dhacay magaalada Dooxa, ee caasimadda dalka Qatar.
Heshiiska qabyada ah ayaa waxaa ka mid ah in Mareykanka uu muddo 20 todobaad gudahii ah dalka Afghanistaan kagala baxo 5,400 oo askari. Sikastaba xaalku ha ahaadee, Mr Khalilzad ayaa sheegay in meelmarinta ugu dambaysa ee heshiiskaasi uu go’aankeeda leeyahay Mr Trump.
Mareykanka waxaa xilligan dalka Afghanistan ka jooga ku dhawaad 14,000 oo askari.
Wixii Dhacay Todobaadkii hore
Natiijada Dhinac waliba Ka Doonayo Wada-hadallada